Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo deeq raashiin gaarsiiyay Xerooyin barakaceyaal
Mogadishu Talaado 22 November 2011 SMC
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa deeqo kala duwan oo raashiinka noocyadiisa kala duwan isugu jira kala gaarsiiyay xerooyin ay degan yihiin dad barakaceyaal ah.
Xerooyinkani ay geeyeen raashiinka ayaa waxa ay kala yihiin xero kutaalla degmada Wardhiigleey gaar ahaan dhabarka dambe ee xarunta Madaxtooyada iyo sidoo kale xero ay degan yihiin dad indhooleyaal ah oo kutaalla siligii ameerikaanka oo katirsan degmada Madiina.
Deeqdani oo isugu jirtay rashiin noocyo kala duwan ah ayaa waxaa soo dhiibay Jaaliyadda Banaadiriga ee kudhaqan qaaradda yurub, waxaana markii ay iska soo aruuriyeen u soo dhiibeen Xildhibaan Shariif Maxamed Sayid kaasi oo isagana kusoo hagaajiyay Xildhibaan Caamir Axmed Maxamed (Jakeeti).
Xerooyinka la geeyay ayaa waxaa ka hadlay Xildhibaan Maxamed Sheekh Cali (obo) isaga oo sheegay in deeqdani ay katimid Jaaliyadda Banadiriga isla markaasina ay si aad ah ugu hambalyeynayaan dadkii soo dhiibay deeqdani, wuxuuna xusay Xildhibaan Maxamed Sheekh Cali in aanu aheyn markii ugu horeysay oo jaaliyadda Banaadiriga ee qaaradda Yurub ay deeq iska soo aruuriyaan kadibna la gaarsiiyo xerooyinka ay kunool yihiin dadka barakaceyaasha ah.
Sidoo kale Xildhibaan Caamir Axmed Maxamed (Jakeeti) ayaa isna ka hadlay deeqdani wuxuuna sheegay in jaaliyadda Banaadiriga mar waliba iyaga oo eegaya dadka xeryaha barakaceyaasha kujira ee la ilowsan yahay in ay mar waliba wax gaarsiiyaan isaga oo xusay in deeqdani ay tahay mid socota muddo dheer oo jaaliyadda Banadiriga ay kawadaan gudaha dalka qeybintiisa.
Dadkii barakaceyaasha ahaa ee loo qeybiyay deeqdani ayaa si aad ah uga mahadceliyay, waxaana ay sheegeen in jaaliyadda Banaadiriga ay taariikhda xusi doonto maadaama deeq bixin ay in muddo ah kahor bilaabeen illaa hadeerna ay wadaan taasina ay tahay mid kudayasho gaar ah mudan.